एमाले समाप्त पार्ने रणनीति असफल भयो • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
एमाले समाप्त पार्ने रणनीति असफल भयो
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको अपेक्षित विजयी हो ?
प्रदेश नम्बर २ को विजयी हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि ज्यादै कम हो । आठ वटा जिल्लाका एक सय ३६ तहमा हामीले धेरै स्थानीय तहमा विजयी हुने लक्ष्य लिएका थियौँ । हामीहरुले धेरै मेहनत गरेका पनि हौँ । जसरी नेकपा एमालेलाई प्रदेश नम्बर २ मा कमजोर पार्न खोजियो त्यसको जवाफ त त्यहाँका जनताले दिइसकेका छन् । सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दा पनि, साराका सारा शक्ति एमालेको विपक्षमा उभिदा पनि २ नम्बर प्रदेशका जनताले माया गरेका छन् । विजयी अपेक्षित नभए पनि जनताको मत अपेक्षित आएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा एमाले कहाँनेर चुक्यो ?
नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर २ का लागि कहीकतै चुकेकै छैन । सत्ता गठबन्धनको तालमेल, मधेशी दलले अप्रत्यक्ष रुपमा तालमेल गर्नु र नेकपा एमालेले विजयी निश्चित भएका स्थानीय तहमा घेराबन्दी हुदा एमाले पछाडि परेको मात्रै हो । एमालेप्रति प्रदेश नम्बर २ का जनताले माया गरेकै छन् । यसैमा हामी सन्तुष्ट छौँ, हामीले बुझेका छौँ त्यहाँ हामीलाई कमजोर पारिएको छ । यसले हामीलाई तत्काललाई राजनीतिक रुपमा घाटा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने अनुमान गरेका छौँ । उनीहरुको गठबन्धन कहिलेसम्म हो भन्ने हो ।
भर्खरै सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठनको संकल्प लिनुभएको छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
अहिले पनि नेकपा एमालेको पक्षमा जनमत रहेको छ । नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि देशी विदेशी शक्तिहरु अहिले पनि सक्रिय छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई लिदा पनि फरक पर्दैन । हामीलाई कमजोर पारिएको छ हामी र हाम्रा कार्यकर्ताहरु कहिल्यै पनि कमजोर हुदैनन् । हाम्रो भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि मंसिर हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात सरकारको नेतृत्व गर्छौ त्यसको संकल्प हामीले लिएका छौँ । त्यसका लागि हामीहरुले सबै कार्यकर्तालाई फिल्डमा खटाउने पनि निर्णय गरेका छौँ । सबै कार्यकर्ताहरु संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न नहुदासम्म घर बस्न पाउँदैनन् ।
देशलाई माया गर्ने, गरिव विपन्नलाई माया गर्ने, देशको समृद्धि चाहाने, देशको सधै परिवर्तन चाहाने पार्टी एमाले भएकै कारण हामी र हाम्रो पार्टी भएकै कारण हाम्रो नेतृत्वमा संघ र प्रदेशका सरकार गठन हुन्छन् । त्यसका लागि हामीलाई नेपाली जनताले मत दिन्छन् हामी ढुक्क छौँ ।
एमालेप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण छ, पार्टी प्रबेश गर्नेहरुको पनि लर्को लागीरहेको छ उनीहरुको ब्यबस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि चार लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरु क्रियासिल छन् । चार लाख पार्टी सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । दिएको जिम्मेवारी सबैले पुरा गरेका छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा भोली दश लाख कार्यकर्ता भए पनि उनीहरुलाई ब्यबस्थापन गर्न हामी सक्षम छौँ । पार्टी प्रबेश गर्नेलाई हामीहरुले ब्यबस्थापन गर्ने गरी प्रबेश गराएका छौँ । उहाँहरुलाई उचित जिम्मेवारी पनि दिन्छौँ ।
आश्वासन पनि केही बाड्नु भएको छ कि ?
कसैलाई केही आश्वासन बाडेका छैनौँ । पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने सबैलाई निम्मेवारी दिन्छ । अगाडी र पछाडि भन्ने केही सुत्र लागु हुदैन । जसको जुन क्षमता छ त्यसको जिम्मेवारी हामी दिन्छौँ । कसैलाई केही आश्वासन बाड्न आवश्यक छैन ।
क्षमता भएका ब्यक्तिहरु मात्रै एमालेमा प्रबेश गर्नुभएको छ । तालिम अन्त गरे पनि अन्त सिकेको सीपलाई एमाले मार्फत् देश विकासमा लाग्ने संकल्प गर्नुभएको छ । प्रबेश गरेकाहरुका लागि पार्टीले सही निर्णय लिन्छ उहाँहरु काममा लाग्नुहुन्छ ।